VaSikhala, VaSithole naVaMasaraure Vombonyinwa Zvekudya Vari Mutirongo
Gweta raMuzvare Moreblessing Ali avo vakapambwa vakazowanikwa vakapondwa kuNyatsime, VaJob Sikhala pamwe nenhengo yeparamende inomirira Chitungwiza North, VaGodfrey Sithole, vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana.
Magweta ari kumirira vaSikhala naVaSithole anoti vaviri ava vapomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga yakaitika nezuro kuNyatsime kuChitungwiza pakati penhengo dzeZanu PF nenhengo dzebato reCitizens Coalition for Change.
Mutauriri webato reCCC, Muzvare Fadzayi Mahere vati vaviri ava vambonyimwa chikafu vari mumawoko emapurisa.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa VaPaul Nyathi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi VaNyathi vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti mapurisa ari kushanda zvakasimbarara kuti asunge vose vane chekuita nemhirizhonga yakaitika kuNyatsime nezuro.
Muzvare Nkosazana Moreblessing Ali
Zvichitevera kusungwa kwaVaSikhala naVaSithole nezvemhirizhonga iyi, VaNyathi vatiwo vari kutsvaga varidzi vemotokari dzine nhamba dzinoti AFD 3636, AEN 7607, ADZ 1128. AFE 9836 pamwe neAEJ 0651 dzavanoti dzakaonekwa dzichisiya vanhu vanoita zvematongerwo enyika kuNyatsime kwakare kuti vaite mhirizhonga iyi.
VaNyathi vaenderera mberi vachiti pane imba yakapiswa kuNyatsime kwakare pamhirizhonga iyi uye dzimwe dzimwe d makumi maviri dzikaputswa mumhirizhonga iyi. Vatiwo pane zvitoro gumi nezvitatu zvakapwanywa panzvimbo yemabhizimusi yeChibhanguza Shopping Centre uye pane kireshi yakapwanywawo mumhirizhonga iyi.
VaNyathi vaenderera mberi vachiti pane vanhu vanomwe vamhan’ara nyaya dzekurohwa pamwe nekupwayirwa midziyo yavo zvichitevera mhirizhonga yanezuro iyi.
Mutauriri wemapurisa akurudzira vose vane ruzivo nezvemhirizhonga iyi kuti vazivise mapurisa uye vati vatumira mapurisa akawanda kuNyatsime kuti vachentedze runyararo.
Hanzvadzi yaMuzvare Moreblessing Ali, VaWashington Ali, vaburitsa mashoko kuvatori venhau vari kuBritain vachishora kusungwa kwaVaSikhala naVaSithole. Vati havasi kuzoviga hama yavo kudzamara vakavaponda vasungwa.
Vati kusungwa kwaSikhala, vanove gweta remhuri yavo, kunoratidza kuti kushungurudzwa kune zvematongerwo enyika mukati kwaMuzvare Moreblessing Ali kurikuenderera mberi kunyangwe nemurufu.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZanu-PF nezuro iyi.
Asi mwana wemufi, Silent akaudza vatsigiri vebato reCCC vaichema amai vake kuti vatsigiri veZanu-PF vari kvashungurudza zvakanyanya.
Mutungamiri webato reDemocratic Party, vati kusungwa kwaVaSikhala kunoratidza kuti sarudzo dzegore rinouya dzinogona kusafamba zvakanaka
Mune imwewo nyaya, mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, VaObert Masaraure, vari kutaririsirwawo kumiswa pamberi pedare mangwana zvichitevera kusungwa kwavakaitwa nezuro vachipomerwa mhosva yekuva nechekuita nerufu rwaVaRoy Issa vakambonzi nedare vakadonha kubva mukamuri yechinomwe kana kuti 7th floor paJameson Hotel vakadhakwa muna 2016. VaMasaraure vari kuramba mhosva iyi.
Munyori mukuru muARTUZ, VaRobson Chere vati vanga vachida kupa chikafu kuna VaMasaraure vakundikana nekuda kwemapurisa akawanda anga akapakatira pfuti pakamba yeHarare Central.
Zimbabwe yatarisana nesarudzo dzemutungamiri wenyika, dzeparamende pamwe nemakanzuru gore rinouya uye sangano reZimbabwe Peace Project rinoti nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nemhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo dziri kuramba dzichiwanda munyika pamberi pesarudzo idzi.